I-velvet yeqokobhe lecush "igreyiti yephawu" - Moi Mili
Ikhaya > Umqamelo weshelf > Isitshixo se-velvet yeqokobhe "igrafu yephawu"
Isitshixo se-velvet yeqokobhe "igrafu yephawu"
I-velvet ye-velvet ye-Moi Mili ye-velvet enomfanekiso oqingqiweyo sisicelo sethu sokuhlobisa ikhaya lakho. Zongezo lwantlandlolo kwigumbi lokuhlala, umhlobiso webhedi okanye isihlalo esinama-rattan. Umqamelo wenziwe ngokuqinileyo kwaye wenziwe ngendwangu ekumgangatho ophezulu velvet ngombala wegrafiti, uwa ngumbala onsomi. Ilaphu elinyibilikisayo liya kwazisa indawo enobunewunewu nakweyiphi na ingaphakathi, liya kubonakala lihle kwigumbi lokuhlala elihle. Sikukhuthaza ukuba wenze iiseti zemiqamelo eliqela, ikhangeleka ngathi inomlingo.